duqeyn lagu dilay Hor-joogayaal ka tirsanaa argagixisada Al-shabaab – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-55787 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / duqeyn lagu dilay Hor-joogayaal ka tirsanaa argagixisada Al-shabaab
duqeyn lagu dilay Hor-joogayaal ka tirsanaa argagixisada Al-shabaab
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka ah ay kula beegsadeen maleeshiyada ururka argagixisada al-Shabab, meel ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose.
War ka soo baxay talis Ciidamada Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulo la yirahdo Garowle, 11-kii bishan, isla markaana ay ku dileen laba ka mid ah maleeshiyada argagixisada.
Qoraalka Mareykanka ayaa lagu yiri “dadaalada sii socda iyo duqeeymaha lagu wiiqayo al-shabab waxey qeyb ka yihiin Istaraatiijiyadda Mareykanka uu ku taageerayo hiigsiga Soomaaliya leh,horumar dhaqaale, dowlad wanaag iyo hey’ado military oo xooggan.
“Waxaanu sii wadeynaa duqeeymaha aan la beegsaneyno qeybaha kala duwan ee hogaanka al-shabab. Duqeymahan suggan waxey qeyb ka qaadanayaa burburka hogaanka al-shabab, sidaasidan waxaa qoraalka AFRICOM ka soo baxay ku sheegay Maj. Gen. Gregg Olson, oo ah madaxa howlgaladda ee AFRICOM.
Talaadadii ayey aheyd sidan oo kale markii Mareykanka ay duqeyn cirka ah ka geysteen meel ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubadda Dhexe, halkaas oo ay ku dileen mid ka mid ah maleeshiyadii bartilmaameedku ahaa ee al-Shabab.
← Previous Story Askari dil ugu gaystay Moto Bajaajle Magaalada Muqdisho
Next Story → Gudoomiye Yariisow oo Cambeereeyey dilkii loo gaystay darawalka Mootaalaha